डा.भट्टराईको प्रश्नः राजनीतिलाई राज्यदोहनको साधन बनाउने भष्मासुरलाई कसले हुर्कायो ? | suryakhabar.com
Home राजनीति डा.भट्टराईको प्रश्नः राजनीतिलाई राज्यदोहनको साधन बनाउने भष्मासुरलाई कसले हुर्कायो ?
on: १२ फाल्गुन २०७७, बुधबार ०९:०४ In: राजनीति, सामाजिक सञ्जालTags: No Comments
१२ फागुन, काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टीका संघिय परिषद अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराईले राजनीतिलाई राज्यदोहनको साधन बनाउने भष्मासुरलाई कसले हुर्कायो ? भन्दै प्रश्न गरेका छन् ।
सामाजिक सञ्जाल ट्वीट माफर्त डा.भट्टराईले यस्तो प्रश्न गरेका हुन् । डा.भट्टराईले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीतर्फ संकेत गर्दै राजनीतिक नेतृत्व यति भ्रष्ट र मूल्यमान्यताविहीन कसरी बन्यो भन्दै अर्काे प्रश्न समेत गरेका छन् । त्यसलाई तुरून्तै जनताले पत्याउने कसरी ममः भनौं उनले भने ।
ऐले दीपावली हैन गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्ने वेला भएको पनि उनको भनाई छ । देश पुस ५ मा फर्केको मात्र भन्दै यी सबै प्रश्न अनुत्तिरत छन्भः भष्मासुरलाई कसले हुर्कायो/पाल्यो ? राजनीतिलाई राज्यदोहनको साधन कसरी बनाइयो उनको प्रश्न छन् ।
उनको ट्वीटः ऐले दीपावली हैन गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्ने वेला हो१देश पुस ५ मा फर्केको मात्र छः यी सबै प्रश्न अनुत्तिरत छन्स्भष्मासुरलाई कसले हुर्कायो/पाल्यो ? राजनीतिलाई राज्यदोहनको साधन कसरी बनाइयोर ? राजनीतिक नेतृत्व यति भ्रष्ट/मूल्यमान्यता विहीन कसरी बन्यो ? त्यसलाई तुरून्तै जनताले पत्याउने कसरी ? ममः भनौं !
संसद पुनःस्थापना भएको खुशियालीमा नेकपाको दाहाल-नेपाल समुहले आज विजय जुलुस गर्दै
दाहाल-नेपाल समुहले बोलायो संसदीय दलको बैठक